Lwesine, Matshi 26, 2009 Lwesine, Okthobha 23, 2014 Douglas Karr
Esi sisithuba esifutshane kwaye simnandi kwimicimbi yecaching. IiSayithi kunye neibrawuza zakhelwe ukuphucula izixhobo. Benza kakuhle ngamanye amaxesha kangangokuba umphumo wokugqibela uyaphula iwebhusayithi yakho enamandla endaweni yokuyihlaziya rhoqo ngendlela othanda ngayo. Namhlanje bendisebenza naye Umdlali weJW, Umdlali weFlash Movie odonsa kuluhlu lweemovie ngefayile yeXML.
Ingxaki kukuba sihlala sihlaziya ifayile ngeewebhu ezintsha kunye neeklasi zoqeqesho. Ukuba abathengi bethu bayaqhubeka nokuza kwiphepha mihla le, iya kulayisha ugcino lwakuluhlu lwadlalwayo kwaye ungaze ubabonise ezona zintsha kunye nezona zibalaseleyo.
Ngenxa yoko, kuye kwafuneka ndiqhekeze i- Ikhowudi yento ye-SWF ukuze icinge ukuba ilayisha uluhlu lokudlala olutsha ngalo lonke ixesha.
Ayisiyonto iluncedo yoMdlali weJW, ndikwasebenzisile obu buchule kwiiMephu zikaGoogle xa ndijongana neefayile zeKML ezitshintsha ngamandla. Yenza nje umbuzo ongacwangciswanga kwaye inkqubo iya kuphinda ilayishe (i-static) ifayile ye-KML ngalo lonke ixesha utyelelo lomsebenzisi. Kukuqhekeza, kodwa yindlela elula yokuguqula i-caching off kwezi zicelo zingenakho ukhetho.
Ubuxoki obungendawo ukuba iMithombo yeendaba yoLuntu iGurus Weave
Jan 5, 2010 kwi-1: 00 AM
Umnqweno omnandi hack